Maciisha Caasimadda oo kor u kacday | KEYDMEDIA ENGLISH
MUQDISHO, Soomaaliya - Tan iyo markii ay qurba joogta billaabeen in ay ku soo gurya noqdaan dalka, waxaa cabasho xoog leh ay ka soo yeereysay, dadka dhaqaale ahaan nolosha uga jira dabaqada dhexe iyo tan hoose.
Kirada guryaha ayaa qaali noqday, sababo la xiriira qurba joogta, oo diyaar la ah lacag ka badan tan ay bixin jireen dadkii dalka joogay, 30-kii sano ee la soo dhaafay.
Heer maanta ay gaarto in qolkii lagu kireeyo, lacag dhan $100 dollar iyo ka badan, halka markii hore lagu kireyn jiray $30 dollar ama $50 dollar, waana caqabad ay dalka ku soo kordhiyeen qurba joogta, oo walaac ku abuurtay inta badan dadka Muqdisho.
Qurba joogta ayaa sidoo kale billaabay, in ay mehrado ganacsi ka furtaan, meelaha ugu camiran magaalada, waxaana taasi ay sababtay in ganacsatadii hore lagu wargaliyo in ay ka guuraan goobihii ganacsiga, ee ay kirada ugu jireen, maaddaama aysan awooddin in ay bixiyaan, lacagta ay dhiibayaan qurba joogta la rabo in mehradahaas laga kireeyo.
Dhallinyarada ayaa ka mid ah dadka ka cabanaya qurba joogta, iyagoo sheegaya in nolosha guurka ay ku cariiriyeen, tusaalle ahaan, wiil iyo gabar hasaawayey in muddo ah, ayaa waxaa si dhib yar reerka gabadha ula heshiinaya nin qurba joog ah, waxaana dhaqaalaha badan ee uu siiyo reerka gabadha ay suurta galineysaa, inuu si fudud ula aqal galo, taas oo niyad jab ku beereysa qofkii dhallinyarada ahaa.
Qurba joogta ayaa sidoo kale, dhallinta dalka wax ku baratay, uga horreeya xaga helida fursadaha shaqo, waana kuwa si dhib yar ku heli og, shaqooyinka ay bixiyaan shirkadaha iyo hay'adaha dalka ka howl-galla.
Waxey sheegayaan dhallinyarada, in taasi ay ka mid tahay, waxyaabaha ku xanbaaraya in ay tahriibaan, maaddaama nolosha magaalada ay u afduuban tahay dadka qurba joogta ah, oo aysan kula tartami karin dhanka dhaqaalaha, isla markaana xitaa kaga horreeya xaga fursadaha shaqo.
Qurba joogta qaar, oo ay KON fursad u siisay in ay ka jawaabaan dhaliilaha loo jeedinayo, ayey ku tilmaameen, kuwa been abuur ah, waxeyna hoosta ka xariiqeen in iyagu ay yihiin, kuwa qura ee maalgalinya dalka, isla markaana 30-kii sano ee la soo dhaafay nolosha dadka aan dalka ka bixin ay ku tiirsaneyd, lacagaha ay qurba joogtu ka soo dirayeen, dalalka ay maciinsadeen, markii ay adkaatay xaaladda dhulkoodii hooyo.